Ukusebenzisana kwe-Alium NFT Marketplace neSinctuition
Siyajabula ukumemezela ukusebenzisana kwethu okulandelayo phakathi kwe- Alium NFT Imakethe kanye nohlelo lokusebenza olukhulu kunawo wonke lwaseYurophu lokucabanga, Synct uition!
Ubhadane lweCovid-19 luguqule umhlaba. Kube nomthelela ekuphileni kwethu futhi kwaguqula nendlela esisebenza ngayo, esifunda ngayo, esisebenzisana ngayo futhi esicabanga ngayo ngempilo. Ngenxa yalokho, sahlala ekhaya, sadlulela “kokujwayelekile” futhi sazama ukuqhubeka nokuphila kwethu. Yize kunjalo iningi lethu selike lalwa (noma liyaqhubeka nokulwa) nesizungu, ingcindezi, ukukhathazeka nokudangala.
Ngenhlanhla, thina bantu siyamangalisa. Singakwazi ukuzivumelanisa nezimo ezinzima futhi sichume. Kungakho, phakathi nobhadane, sinqume ukudala ukusebenzisana okuhlukile phakathi kwe-Alium Art NFT Marketplace neSynctuition ukulethaumhlaba ithuluzi elibalulekile lokunciphisa ukukhathazeka nokwenza ngcono ukulala.
MindSpa & Synctuition Uhlelo lokusebenza lokuzindla luyatholakala ku-Google Play Isitolo nase-Appstore futhi kuze kube manje seluthole ukulanda okungaphezulu kwezigidi ezi-5. Ngeminyaka eyishumi yentuthuko kanye nomkhiqizo wokuzindla oguqukayo, iSynctuition yawina i-CorporateLiveWire Innovation & Excellence Award ngo-2021 futhi yaba yi-Network Product Guide Gold IT World A wards Holder ngo-2020.
Uhlelo lokusebenza lwe-Synctuition luyaqhubeka nokufuna okusha kanye nokwakhiwa kwethuluzi lokuzindla elisika ekugcineni lokuthuthukisa impilo yengqondo. Namuhla, sithanda ukumemezela ukuthi nge-Alium NFT Marketplace, iSynctuition izokwethula umsindo wokuqala we-3D emhlabeni owenzelwe ukuthuthukisa impilo yengqondo. Ngokwengeziwe, iSynctuition izoba uhlelo lokusebenza lokuzindla lokuqala ukunikela ngohambo lomsindo oluklanywe ngokukhethekile njengeNFT.! Indlela eyingqayizivele yentuthuko yeSynctuition izoletha okuthile okusha ngokuphelele emakethe yeNFT ngosizo lwendawo yethu yemakethe ye-Alium NFT.
Ngokuhlangenwe nakho kuka-Alium ekwethulweni komkhiqizo i-Next Generation NFT nenjongo ye-Synctuition yokwenza ngcono umhlaba ube ngcono, thina kholwa ukuthi lokhu kusebenzisana kuzoba yisinyathelo esiya phambili seNFT Market kanye neNtuthuko. Imininingwane ethe xaxa izovezwa maduze, ungaphuthelwa yithuba lokubamba iqhaza kulo mcimbi oyingqayizivele ngempela! ubuchwepheshe bokuzilibazisa obuyingqayizivele. Kusetshenziswa amandla amangalisayo omsindo we-3D, iSinctuition idlula kude nje ukuphumula kokuzindla, iletha ulwazi lokuntywila kwengqondo olungafaniswa nokunye ukuzindla komsindo emhlabeni.
Mayelana ne-Alium Finance I-Alium Finance iyisimo semvelo seMultiChain DeFi esine-roadmap yokuvelela yeCrossChain DeFi ne-NFT imikhiqizo.
Imikhiqizo yethu ifaka phakathi i-Alium Swap MultiChain DEX ne-Alium Art, indawo yemakethe ye-MultiChain NFT.
Mayelana ne-Alium Art I-Alium Art iyinhlobonhlobo imakethe yesiteshi yeNFT ezotholakala kuqala ku-Binance Smart Chain, kuseza ama-blockchains amaningi. Ithuthukiswe yithimba lama-veteran e-NFT ngokubambisana nabaculi abadumile be-NFT - i-Alium Art izama ukunikeza isikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula namakhomishini aphansi abaculi nabaqoqi. Ngaphezu kwemibukiso, amaqoqo, nezinqolobane, sinezici eziningi ezinhle ezizayo. Rlalela izindaba ezinkulu!